TrendSpottr: လူမှုရေးဆူညံသံကိုလက်တွေ့လှုပ်ရှားနိုင်သည့်အစောပိုင်းအချက်ပြသို့ပြောင်းပါ။ | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, ဇန်နဝါရီလ 13, 2015 Douglas Karr
လူမှုမီဒီယာ၏ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုမတိုင်မီကဖောက်သည်များ၏ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများအားလုံးကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးခေါင်းစဉ်အလိုက်အမျိုးအစားခွဲခြားသောမြက်ခင်းစောင့်ရှောက်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုရှိခဲ့သည်။ ပထဝီအနေအထားအရဒေသတွင်း၌ပေါ်ပေါက်လာသောပြissuesနာများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးခေတ်ရေစီးကြောင်းခေါင်းစဉ်များအပေါ် အခြေခံ၍ အထူးအာရုံစိုက်သောအီးမေးလ်များကိုပေးပို့နိုင်သောကြောင့်၎င်းစနစ်သည်အရောင်းအင်ဂျင်အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ မြက်ခင်းပြင်စောင့်ရှောက်သူများသည်သတိပေးချက်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ထို့နောက်စတိုးဆိုင်ရှိသင့်လျော်သောအဖြေကို ၀ ယ်နိုင်သည်။
ခေတ်ရေစီးကြောင်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မယုံနိုင်စရာအခွင့်အလမ်းဖြစ်သော်လည်းအချို့လူများကစီးပွားရေးရလဒ်များကိုထိရောက်စွာမောင်းနှင်နိုင်သည့်အချက်ပြများကိုမခြေရာခံနိုင်ပါ။ ရာသီဥတု၊ ဘဏ္financeာရေး၊ ကျန်းမာရေးသို့မဟုတ်ရောင်းအားအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသောအခြားမည်သည့်အကြောင်းအရာမဆိုဖြစ်နိုင်သည်။ TrendSpottr လူမှုမီဒီယာဆူညံသံကိုလက်တွေ့လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အစောပိုင်းအချက်အလက်များအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးသည်။
TrendSpottr ဆိုသည်မှာ cloud အခြေခံကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်သည် analytics တွစ်တာနှင့်ဖေ့စ်ဘွတ်အပါအ ၀ င်ကြီးမားသောဒေတာစီးဆင်းမှုများမှအချိန်နှင့်တပြေးညီဖြစ်ပျက်မှုများကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသည့်ကုမ္ပဏီ။ TrendSpottr ၏ ၀ န်ဆောင်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ယ်ယူသူများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအားဗိုင်းရပ်စ်အလားအလာနှင့်စျေးကွက်သက်ရောက်မှုများရှိသည့်ထွန်းသစ်စသတင်းများ၊ အဖြစ်အပျက်များနှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများကိုဖော်ထုတ်ခြင်းအားဖြင့်“ ရှေ့သို့တက်” ရန်ခွင့်ပြုသည်။
သတင်းဌာနများ၊ ထုတ်ဝေသူများ၊ PR ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ အစိုးရအေဂျင်စီများ၊ ဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်သမားများ၊ လူမှုမီဒီယာသုံးစွဲသူများ၊ စတော့ကုန်သည်များနှင့်ဘဏ္financialာရေးအဖွဲ့အစည်းများသည်ဗိုင်းရပ်စ်သတင်းရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၊
Trendspottr နှစ်ခုလုံးနှင့်လည်းပေါင်းစပ်သည် Salesforce အဖြစ်ကောင်းစွာတစ် ဦး Radian6 Buddy မီဒီယာလူမှုရေးစတူဒီယိုပါတနာအဖြစ်Hootsuite ။ သူတို့မကြာသေးမီကစတင်ခဲ့သည် အပေါ် Instagram ကိုများအတွက် TrendSpottrHootsuite အဖြစ်ကောင်းစွာ!
TrendSpottr နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုစမ်းသပ်ခြင်းဖြင့်ကြီးမားသောဒေတာများမှအချိန်နှင့်တပြေးညီဖြစ်ပျက်မှုများကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်စွမ်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။ TrendSpottr အချက်ပြ, TrendSpottr သတိပေးချက်များ နှင့် TrendSpottr ဝစ်ဂျက်များ.
TrendSpottr JSON API ကိုရှာဖွေ၊
Tags: သတိပေးချက်များ apiကြီးမားတဲ့ data တွေကိုFacebook က+ googleinstagramlinkedinလူမှုမီဒီယာကိုရှာပါလူမှုမီဒီယာလူမှုမီဒီယာသတိပေးချက်များလူမှုမီဒီယာသတိပေးချက်များလူမှုမီဒီယာ apiလူမှုမီဒီယာခေတ်ရေစီးကြောင်းလူမှုမီဒီယာခေတ်ရေစီးကြောင်း apiဦးတည်ချက်များခေတ်ရေစီးကြောင်းမင်္ဂလာပါတွစ်တာ
Douglas Karr Tuesday, January 13, 2015
Kickdynamic - Open မှာ Hyper-Personalized အီးမေးလ်အကြောင်းအရာ